Nhau - Anofara Lantern Mutambo!
Chishanu, Kukadzi 26, 2021 ndiwo Mutambo weRenje kune vese maChinese. Iwo mutambo unofadza. Kunyanya husiku hunonakidza.
Pazuva rino, vanhu vanorembedza mwenje, voisa chirahwe pasi payo. Ipapo kunouya mutambo: fungidzira chirahwe!
Uyo anofungidzira chirahwe chaicho achahwina mibairo. Zvakafanana nemutambo wePK uzere nekuziva uye kuseka uye mufaro.
Zvakare pane nhevedzano yezviitwa zvechinyakare sekuona mwenje, kudya madhayeti, uye kumisa mafiraya.
Manheru, marambi anozobatidzwa. Inoita husiku hwakanaka!
Pano tinoshuva kuti munhu wese ave neakanakisa Lantern Mutambo!
Nhoroondo: Chiitiko uye nhoroondo yemutambo weLantern:
Mutambo wemwenje unodyiwa pazuva regumi nemashanu remwedzi wekutanga wemwedzi. "Yuanxiao" yashandiswa sechikafu kwenguva yakareba munyika medu. MuRwiyo Rwedzinza, chikafu cheinovhera cheMwenje yeMwenje chakazove chakakurumbira pakati pevanhu. Chikafu chemhando iyi chakatanga kunzi "Yakamhanya Yuanzi" uye gare gare "Yuanxiao", uye vanamuzvinabhizimusi vakazvidaidzawo "Yuanbao". Mutambo wemwenje unoshandisa shuga, maruva, sesame, bhinzi yekunamatira, sinamoni, walnuts kernels, nzungu, jujube paste, nezvimwe sekuzadza. Iwo ekuzadza anoumbwa uye anokunguridzirwa muhupfu hwemupunga wemupunga. Iwo anodhakwa mupunga mabhora anotanga kugadzirwa kuita makanda ane glutinous mupunga wemupunga. Yakagadzirwa nekupaza, uye nzira yacho yakatosiyana. Mutambo wemwenje unogona kuve nyama kana yemuriwo, uine akasiyana siyana. Inogona kubikwa muto, yakadzika-yakabikwa, uye kupiswa.
Kufungidzira zvirahwe zvemwenje zvinodaidzwa zvakare kuti zvirahwe zvemwenje. Zviri zvetsika chiitiko Lantern Festival. Zvirahwe zvemwenje zvakatanga kugadzirwa kubva kuzvirahwe uye zvakatangira muChirimo uye Autumn uye Warring States nguva. Chirahwe chakarembera pamwenje kuti vanhu vafungidzire nekupfura. Yakatanga muSouth Rwiyo Dzinza. Maodzanyemba Rwiyo Zhou Mi's "Zvekare Zvinhu Zvekurwa?" "Deng Pin" zvinyorwa: "Shandisa marambi esiriki kutema nhetembo, kuseka, uye kupenda mavara, yakavanzwa musoro matauro, uye mutauro wekare weBeijing, uchiseka vafambi." Lantern Festival, mambo mambo never usiku, Chitubu Mutambo Lantern Festival, vanhu Miscellaneous, nhetembo, zvirahwe, mabhuku vari rambi, zvinoratidzwa kenduru, dzakanyorwa ari thoroughfare, vachibvumira vanhu kufungidzira, saka inonzi "zviedza zvemwenje"
Ichi chiitiko chinonyanya kuitirwa vanhu vekurima. Nekuti mbeva dzinogara dzichidya matutu makuru esirikusi husiku, vanhu vakanzwa kuti kana vachipa mbeva nemupunga porridge pazuva regumi neshanu remwedzi wekutanga wemwedzi, vanogona kusvetuka makonye esiriki. Naizvozvo, vanhu ava vakabika hari hombe yeporridge ine mutete pazuva regumi neshanu remwedzi wekutanga wemwedzi, uye vamwe vavo vakaifukidza nechuru chenyama. Ndichiri kuverenga shoko, kutuka mbeva kudya mwana wesikonye kuti zviome kufa.